Apple inogona kushandisa Samsung's 5G modems ye iPhone yegore rinouya | IPhone nhau
Apple inogona kushandisa Samsung's 5G modems ye iPhone yegore rinouya
Mazuva mashoma apfuura, uye nekuona kuti zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti Apple yakanga iine zvese zvinopesana nazvo, Qualcomm neApple vakazivisa kuti vanga vasvika pachibvumirano nokuti gadzirisa hondo dzese dzemutemo iyo yavakange vakatarisana kwenguva inopfuura gore uye izvo zvakakonzera ichivharira kuGerman kwekutengesa kwemhando dzakasiyana dze iPhone, sezvazviri China.
Kunyangwe huwandu hwechibvumirano husina kuburitswa pachena, sekureva kwenhau dzakasiyana siyana, Apple yafanirwa kubhadhara inodarika zviuru zvitanhatu zvemadhora izvo zvakare zvinokutendera iwe kuti uenderere mberi nekushandisa Qualcomm tekinoroji kwemakore anouya. Nekudaro, ini ndinopokana zvikuru kuti Apple ichiri kuda kuvimba neQualcomm zvachose uye iri kutsvaga dzimwe nzira.
Kutsvaga dzimwe nzira dzemodemu dze5G yanga isiri basa rakareruka kuApple, kubvira Intel, iyo Apple yainge yaisa ruvimbo rwayo kuti itenge ma modem e5G, akazivisa kuti ave kuenda pamudyandigere, danho rakamanikidza zvakare Apple kuti ipfuure nemhete yeQualcomm.
Ming-Chi Kuo, muongorori ane huwandu hwakawanda hwekururama mune zvaakafungidzira, anotsigira kuti Samsung aigona kuve mutengesi mukuru we5G chips yePhones izvo zvinosvika muna 2020. Nenzira iyi, Apple inogona kusiyanisa mutengesi wemamodemu ayo e5G pasina kuvimba ne100% paQualcomm.
Mazuva mashoma apfuura, nhau yakaburitswa ichitaura izvozvo Huawei ingadai yakapa maChips ayo e5G kuApple chete, kuyedza kutsvaga nzira yekubuda mukukonana kwaakange akatarisana neQualcomm panguva iyoyo, nhau iyo nguva pfupi yapfuura yakarambwa nekambani yeAsia.
Kana Apple isiri kushanda yayo 5G chip, zvingangoita munguva inotevera, nekuti kazhinji ungangoda kuva nesarudzo yekumira kushanda neQualcomm, uyo waunofanirwa kuenderera uchibhadhara mari yakawanda kune yega yega iPhone yaunoisa pamusika nekushandisa zvese zviri zviviri patent uye tekinoroji yayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Apple inogona kushandisa Samsung's 5G modems ye iPhone yegore rinouya
Siri inogona kushanduka ikave yakakosha muIOS 13
iOS 13 inobvumidza kupinza mafaera kubva kune zvekunze zvishandiso kune zvinoshandiswa